Archive du 20171206
Hambom-po politikan’ny HVM Hilalaovana ny fiainam-bahoaka…
Tsy misy zavatra mandeha amin’ny laoniny intsony eto amin’ny firenena fa variana manao kajy politika sy miady an-trano ny HVM ka dia io iaraha-mahita io ny zava-misy.
Guy Maxime Ralaiseheno “Tsy manohana na iza na iza aho”
Nanamafy i Guy Maxime Ralaiseheno omaly tamin’ny alalan’ny antso an-tariby nifanaovana taminy fa tsy mbola nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny tenany hoe miaraka na manohana an-dRabe na Rakoto ary tsy manilika ny hafa ihany koa ary mandiso ny fanambarana an-gazety fa tsy mila an-dRavalomanana sy Rajoelina ary Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana.
Taratasin’i Jean Hanova vavony
Henjana ianareo ry Jean a ! Tena miaiky anareo aho. Toa tsy mino aho fa ozon-drazana na loza voajanahary ilay nahazo antsika tamin’ny herintaona iny.
Basikety N 1 A lahy sy vavy Nandravarava indray ny Fandrefiala Analamanga
Nitohy omaly talata 5 desambra 2017 ny fiadiana ny ho tompondaka nasionalin’ny basikety 2017 miverina sokajy N1 A lahy sy vavy izay notontosaina tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina rehefa niala sasatra kely ny alatsinainy 4 desambra.
Miandry fahagagana !
Antomotra ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018, ary samy mitady izay fomba fiady hoenti-mandresy na ireo sokajiana ho mpanohitra na ireo eo amin’ny fitondrana.